यी राशि भएका व्यक्तिसंग कतै तपाइको प्रेम सम्वन्ध त छैन ? पछुताउनु पर्ला - Muldhar Post
यी राशि भएका व्यक्तिसंग कतै तपाइको प्रेम सम्वन्ध त छैन ? पछुताउनु पर्ला
धर्मदर्शन २०७४, ११ पुष मंगलवार 496 पटक हेरिएको
एजेन्सी। ज्योतिषशास्त्रको अनुसार प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन् । कुनै–कुनै राशिबिचको सम्वन्ध एकदमै नराम्रो हुने र उनीहरु विचको सम्वन्ध कहिन्यै राम्रो नहुने हुनाले प्रेम र विवाह गर्न नहुने सुझाव दिइन्छ । भने केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै मेलमिलाप पनि हुने हुन्छ ।